Gịnị kpatara Outlook PST faịlụ ji dị njọ na nrụrụ aka?
Mbido > ngwaahịa > DataNumen Outlook Repair > Gịnị kpatara Outlook PST faịlụ ji dị njọ na nrụrụ aka?
Outlook bụ most a na-ejikarị email ahịa na Windows ụwa. Agbanyeghị, faịlụ data Outlook PST nwekwara nrụrụ aka. N'ihi gịnị? N'okpuru anyị ga-enyocha ihe kpatara ya na azịza kwekọrọ.
1. Microsoft anaghị enye ụzọ dị irè iji gbochie nrụrụ faịlụ PST
Onye mbu na most dị mkpa bụ na Microsoft anaghị enye ụzọ dị irè iji gbochie nrụrụ aka, dị ka ndị a:
Filedị faịlụ PST n'onwe ya enweghị njirimara nrụrụ aka, dị ka ndekọ mgbake dị ka WinRAR .RAR usoro nchekwa ma ọ bụ ibe iyi dị ka ọ dị SQL Server .MDF nchekwa data. Site na ndekọ mgbake ma ọ bụ iyi iyi, mgbe otu akụkụ nke data rụrụ arụ, ọ dị mfe iji weghachite ha ma belata ohere ịnweta data site na 90%.
The PST faịlụ a dị mfe na-emerụ mgbe file size abawanye, na e nweghị usoro iji gbochie nke a na-akpaghị aka. Outlook agaghị eji ọtụtụ faịlụ iji chekwaa data na akpaghị aka mgbe nha faịlụ buru ibu. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji aka ya mee ya. Ma n'ezie, most nke ndị ọrụ agaghị achọpụta nke a. Nanị ihe metụtara ya na Outlook na-akpali onye ọrụ iji debe ozi ịntanetị ochie, mana atụmatụ a anaghị a paya ntị na nha faịlụ ahụ.
Na Outlook, enweghị atụmatụ nchekwa akpaaka maka faịlụ PST. Ọ bụrụ na Outlook nwere ụdị ọrụ a, ọ bụrụ na faịlụ PST rụrụ arụ, ọbụlagodi na enweghị ike weghachite ya, mmadụ nwere ike weghachite ụdị ndabere mbụ, nke ga-ebu most nke data ohuru ma oburu na eme nkwado ndabere kwa izu.
Microsoft na-enye a free PST faịlụ mgbake ngwá ọrụ a na-akpọ scanpst, soro Outlook. Agbanyeghị, ọ nwere ike idozi faịlụ PST naanị na obere nrụrụ. Ọ bụrụ na mmebi ma ọ bụ nrụrụ aka dị njọ, mgbe ahụ scanpst ga-ada maka most nke ikpe.
2. Ọtụtụ ndị na-emegbu faịlụ PST:
Outlook bu ihe ama nke na otutu mmadu jiri ya kwa ubochi. Ọtụtụ na-eji faịlụ PST eme ihe na-eme ka ọ bụrụ nrụrụ aka:
N'oge a n'ihi mmụba nke ozi ịntanetị na data nkeonwe ndị ọzọ, nha PST faịlụ na-abawanye n'ụzọ dị egwu. Site na otutu GBs na mbido, rue ihe kariri 20GB ma obu obara 50GB. Nnukwu bụ faịlụ PST, ọ ga-adịrị ya mfe imebi. Ezigbo omume iji jikwaa data buru ibu bụ ịkewa ha n'ime obere faịlụ PST, dịka ọmụmaatụ, na-edekọ ozi ịntanetị ochie na faịlụ PST echekwara, iji jide n'aka na faịlụ PST ọ bụla <= 10GB, kama iji faịlụ PST buru ibu.
Otu onye ga-emechi kọmputa ahụ mgbe Outlook meghere faịlụ PST, nke ga-emekwa ka nrụrụ aka.
Otu onye ga-echekwa nnukwu faịlụ PST na draịva netwọkụ, nke anaghị atụ aro ya ebe ọ bụ na ezubereghị PST faịlụ maka nke a. Ma ọ dị mfe ịmebi nrụrụ aka mgbe ịnweta faịlụ PST site na netwọkụ.
Enwere ike ịchọta ozi zuru ezu gbasara omume dị mma iji gbochie nrụrụ faịlụ PST na https://www.datanumen.com/prevent-pst-corruption/
Etu esi edozi faịlụ PST rụrụ arụ:
Ọ bụrụ na nrụrụ faịlụ PST emee, mgbe ahụ ị nwere ike ịnwale n'efu scanpst, ebe ọ bụ na ọ bụ ọrụ gọọmentị nke Microsoft nyere iji dozie faịlụ PST rụrụ arụ, ọ dịkwa n'efu. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, ị nwere ike ịnwale DataNumen Outlook Repair.